Mandala Tattoos Chirongwa Chimiro Kwevarume nevakadzi - Tattoos Art Ideas
Mandala Tattoos Chirongwa Chimiro Kwevarume nevakadzi
Hapana chirevo chokuti tattoo yaMandala ndiyo imwe yenyika dzakanakisisa panyika. Iwe unozviona kamwe chete uye chiyeuchidzo chekunyora tattoo muyeuke. Pane zvakawanda zvezvinyorwa zvinovhiringidza zvakapoteredza iyi tattoo yakakosha. Nhasi, haisisiri vanhu veMandala vari kushandisa iyi tattoo. Iwe unogonawo kushandisa iko zvakare.
Mandala tattoo zvinoreva
Mandala tattoo ine zvakawanda zvinorehwa uye inogona kureva kuora. Denderedzwa pamutambo inotaura nezvekukwanisa uye kuenzanisa uye nekusingaperi, apo iwe wakatarisa kumativi ose kubva kubva pakati kusvikira kumativi ose. Zvizhinji zvezvitendero zviri kushandisa iko kutaura zvinhu zvakawanda kune vakatendeka.
ChiHindu - maererano neHinduism, #mandala inogona kureva kufungisisa. Ichi ndechokuti inoshandiswa sekutarisa uye yava chigadziro pamusoro pemweya.
Chikirisitu - ChiKristu chinotora mandala kune imwe nhanho nokuti inogona kuratidzira pamativi akasiyana echechi kufanana nemahwindo anoratidza mabasa anokosha uye anogonawo kushandiswa sechimiro cheunyanzvi.
ChiBhudha - Mandala anewo chimwe chekuita nevaBuddha, vanoishandisa mumitambo yavo yechitendero uye yekufungisisa. Inoshandiswa sechiratidzo chekuenzanisa muupenyu.
Mandala #tattoo yakava izvo vanhu vakawanda vanoshandisa kushandisa kuti vanomiririra zvinhu zvakawanda muhupenyu, kufanana nemitumbi yekudenga. Chiratidzo chinogona kushandiswa pakuita zvinyorwa zvakawanda zvaunokwanisa chaizvo kuziva kana iwe uri mudiwa wekinyorwa yakanaka yekunyora uye unoda pfungwa.
Zvinorevei kuva nechiratidzo chakadai? Kwemakore, taona mazana evanhu vachishandisa chirevo ichi kuti vashongedze miviri yavo. Eveyone vane maonero avo chaiwo ekuona tattoo. Vanhu vashomanana vanoifarira apo vamwe vasiri, uye zvinonzwisisika zvachose pamhaka yokuti haisi imwe yei. Via
Makumi emakumi emakore asati apfuura, basa iri remuviri rakagamuchirwa munharaunda yose, uye vanhu vakanyatsozviita vaionekwa sekumuka. Via
3. Chidya Mandala Chigwa
Izvo zvingaita, mazuva ano, vanhu vose vakave vakawanda zvikuru kune hurumende kune iyo, kunyange zvakadaro kune vanhu vakawanda vasingadi kuwana inked kwenguva yose. Via
Izvo zvisingagoni kuzivikanwa nevakawanda ndezvekuti "tattoo" inopinza mutauro wechiTahiti "tatu" iyo inoda kutema chimwe chinhu. Kufungisisa kuti zvinhu zvose zvakatanga kupi? Via
5. Ngara Mandala Tattoo
Zvinhu zvose zvinofungidzirwa, wakabata mhepo yeiyo yakakurumbira "Iceman" yakawanikwa 1991? Akanga ari munhu mukuru uyo ​​aive nemuviri wake wakanyura munzvimbo dzakanaka dze58. Nhamba shoma inotsvaga kusanganisira kushandiswa kwemasero yakaroorana yakaratidza kuti akanga ari makore e5300 yemakore Via
6. Dzokera Mandala Tattoo
Pakati pemitsara iyi, zviri pachena kuti unyanzvi hwemuviri hausi hupombwe hwakasikwa nenzira chero ipi zvayo; yaive yakawanda makore akawanda zvisati zvaitika. Via
Vanhu vekare vakarembera vachidzoka shure kwemazana akawanda emakore anoshandiswa muviri kuti vadzivise zvirwere. Kushandisa nenyuchi kuinki muviri wakatanga kugadziriswa nevaIjipita mushure mokunge wakapararira muGreece, Arabia uye pakupedzisira Asia. Via
8. VaMandela Vanodzoka Tattoo
Pasinei nokuti iyo yakatanga kushandiswa kusiyanisa hoodlums, yakashandurwa ikava basa muJapan kusvika pakuti kunyange Yakuza mafia akashandisa iyo kuti atye vamwe. Via
Nzira shure mazana emazana emakore zvisati zvaitika; chaive chimiro kune dzimwe mhuri dzakakura kuti zvikwiriso zvadzo zvive mumakumbo avo asi mushure meNorman intrusion, chiito ichi chakaparara nekukura. Via
Mumakumi emakore ose, maikirwo nemidziyo yakashandiswa kuinwa zvakashanduka zvakajeka zvakakodzera kubva kune zvikamu zvakakosha zvechirwere chinoramba chichigadzirwa nemichina inoshandiswa sechikamu che1891. Via
12. Chikonzero Nei Waifanira Kuenda Mandala Tattoo
14. Ngara Mandala Tattoo
Pane zvinhu zvakawanda zvekuti iwe unogona kuita kuti Mandala yako aoneke. Kana iwe uchivhiringidzika pamhando ye tattoo #design iwe waunenge uine iyo paMandala yako, ingoenda kuInternet uye tarisa mazana emagadzirirwo achakodzera pane wako zvakakwana. image source
15. Dzokera Mandala Tattoo
Kana iwe uchida chaizvo kutarisa zvakasiyana neizvi, zvose zvaunoda kuita ndezvekugadzirisa rako pachako nemashiripiti kana mazwi ekunyora kuti ave akasiyana. Chakavanzika chekutarisa zviri nani uye chakakosha nemattoo ndechokuwana izvo vamwe vasina kuita nemaitiro avo. image source
16. Chidya Mandala Tattoo
Mandala tattoo ine shoko rinokosha iro rinogona kutumira. Icho chimwe chezvinhu zvakanakisisa zvinonzi tattoos zvinogona kuitwa nomunhu. image source
Haisi chete uye yakakura uye yakanaka, inokupa mhepo yehupfumi uye hupfumi. Iwe unogona kuita zvakawanda zvedzidzo zvaunoda nekukasika zvisikwa zvakasiyana, maumbirwo kana maumbirwo paMandala yako ane zvakawanda zvekusununguka. image source
Pane zvinhu zvaunofanira kufungisisa usati waenda kune yako Mandala tattoo. Iwe unofanirwa kufunga nezvemashoko ako ari kuedza kuratidza nemutambo wako. image source
Iwe unofanira kufungisisa kana iwe uri kutora tattoo kuti uremekedze chikamu chemuviri wako. Zvichida, iwe uri kufunga nezvekubuda kunze kwemashoko ehumweya kana rumwe rudzi rwemharidzo yaunoda kutitaurira. image source
20. Ngara Mandala Tattoo
Apo iwe uri kufunga nezvekutora iyo yakaisvonaka Mandala tattoo, fudzi rinogona kuva nzvimbo yakakwana yaro. Tinogona kukuudza nguva dzose kuti vazhinji vevakadzi vanoshandisa chimiro ichi. image source
Hapana munhu anogona kukunda kuzadzika kunouya apo iwe une Mandala yakanyora yakaita seyizvi. Kunyangwe vashandisi vekutanga ve tattoo vanochida. image source
Kunyange varume vacho havagone kusiyiwa kunze kweMandala tattoo. Nechinangwa chakadai, iwe une tattoo yakanaka kuti uzvirumbidze. image source
Dzvanya pano kune mamwe Mandala Tattoo Ink Idea yevasikana
watercolor tattoochifuva tattoosrose tattoosarrow tattoodiamond tattoohanzvadzi tattooscherry blossom tattooscorpion tattoobirds tattooskorona tattoosmwedzi tattoosangel tattooselephant tattoocute tattoosinfinity tattookoi fish tattooHeart TattoosGeometric Tattoostattoos for girlscross tattooszodiac zviratidzo zviratidzotattoo ideasbutterfly tattoostattoo yezisorip tattoostattoos kuvanhuAnchor tattoossleeve tattooscouple tattoosarm tattoosshamwari yakanakisisa tattoosrudo tattooscat tattoosshumba tattoohenna tattooeagle tattoosback tattoosoctopus tattoolotus flower tattooAnkle TattoosFeather Tattoomimhanzi tattoosfoot tattoosneck tattooscompass tattoomehndi designzuva tattoosmaoko tattoostribal tattoosflower tattoos